Nubia Red Magic 3s nwere ụbọchị mbido gọọmentị | Gam akporosis
Nubia Red Magic 3s enweela ụbọchị ọpụpụ gọọmentị
Anyị amaworị nke ahụ el Red anwansi 3s a ga-eme ka ọchịchị na Septemba, ma ọ bụghị mgbe kpọmkwem. Companylọ ọrụ ahụ nwere ọtụtụ ihe aka ya, ruo na ekwentị a, ọ bụ ezie na ndị a agaghị eju anyị anya nke ukwuu n'ihi na anyị anọwo na-ekpughe ọtụtụ njirimara na nkọwa nke ọdụ a, nke na-arụtụ aka na ngalaba ahụ. Ịgba Cha Cha.
Site na posta ọkwa nke ndị ọrụ enyemaka ZTE nke China ekpughere, ụbọchị mwepụta nke ngwaọrụ a Snapdragon 855 Plus bịara mara, na bụ ndị na-esonụ ...
Akwụkwọ mmado mgbasa ozi nke Red Magic 3S nke Nubia bipụtara site na netwọkụ mmekọrịta mmekọrịta Weibo kọwara nke ọma na A ga-ebido ụbọchị mmalite nke ọnụnọ a na Septemba 5 ọzọ, ụbọchị nke, ruo ugbu a, erughị otu izu. A ga-eme nke a ka ọ bụrụ ọkwa na ahịa ndị China.
Nubia Red Magic 3S na-ebupụta mpempe akwụkwọ
Akwụkwọ mmado ahụ na-egosi nkọwa zuru oke nke anyị na-agaghị enwe ike ịhụ. Dị ka anyị na-ahụ n'ebe ahụ, mkpanaka ahụ ga-abịa site na usoro ikuku ikuku. Obi abụọ adịghị ya na Nubia Red Magic 3S bụ njedebe nke Red Ime Anwansi 3. Ya mere, a na-atụ anya na ngwaọrụ ahụ ga-aga n'ihu na-ekpo ọkụ ikpo ọkụ nke Red Magic 3.
Nubia Red Magic 3 rutere na Spain
Red Magic 3 na-egosipụta ihe izizi mbụ nke ụlọ ọrụ n'ime nke na-ejighi mgbatị ahụ ọ bụla ma mee ya site na nanomaterials. Companylọ ọrụ ahụ na-ekwu na onye ofufe ahụ na-agba ọsọ na 14 puku RPM (mgbanwe na nkeji ọ bụla) ma na-erepịa obere ike, yabụ ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara imetụta ọchịchị obodo nke ama. A na-akwado sistemu a site na mmiri na-eme ka mmiri dị jụụ na-eme ka okpomọkụ dị n'ime oyi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nubia Red Magic 3s enweela ụbọchị ọpụpụ gọọmentị
LG Q70: Uzo ohuru ohuru bu akara
Knight Quest bụ egwuregwu nkịtị nke ị ga-eji otu chess gafere